Indaba yempumelelo LLC "Razdolye" (Isifunda saseMoscow) - Umagazini i- "Potato System"
Indaba yempumelelo ye-LLC "Razdolye" (isifunda saseMoscow)
Inkampani "Razdolye" LLC yasungulwa ngonyaka we-2008, kepha yathola umzuliswano omusha entuthukweni ngo-2015
unyaka ngokufika kwethimba labaphathi abancane nabathuthukayo.
Imakethe yezolimo yahlaziywa futhi kwasungulwa isu elilungile lenkampani kule ndawo, kucatshangelwa inhlabathi nezimo zezulu. Kuze kube manje, kuqala kunikezwa izindawo ezintathu: ukutshala amazambane; ukuthengwa kwefula (hay, utshani) nokukhula okusanhlamvu. Ibhizinisi linezigaba ezintathu ezihlukene esifundeni saseMoscow - i-Istra neDmitrovskoye, ekhiqiza okuphakelayo, kanye neKlinskoye, egxile ekukhuleni amazambane. Lesi sakamuva siseduze nesiqiwu semvelo iZavidovo. Kungakho igama lomkhiqizo wethu - "Amazambane aseZavidovsky".
Inkampani yethu yenza umjikelezo ogcwele wemisebenzi yokukhiqiza yokulima, ukucubungula, ukugcina nokuthengisa imikhiqizo yezolimo, esivumela ukuthi silawule ikhwalithi kulo lonke uchungechunge lokukhiqiza - kusuka ensimini kuye kumthengi wokugcina. Manje leli pulazi selinamahektha angaphezu komhlaba ayizinkulungwane eziyi-10,5, kanti ukwanda komkhiqizo ophelele ngonyaka wezi-2020 kwaba ngaphezu kuka-70%. Le nkampani inewebhusayithi esemthethweni www.ecorazdolie.com ne-akhawunti ye-Instagram @eco_razdolie
Le nkampani iqashe abantu abangama-45, ngaphezu kwalokho, babalelwa ku-20 abantu abasebenza phakathi nenkathi ngaphansi kwenkontileka. Le nkampani njengamanje isesigabeni sokuthuthuka nokukhula okusebenzayo, ngakho-ke ngo-2020 inani labasebenzi lenyuke ngo-45%.
Manje sisebenze ubuchwepheshe bamazambane akhulayo futhi silethe indawo yokutshala kumahektha angama-250 kulo nyaka, kanti ngonyaka ozayo sihlela ukuyinyusa ibe cishe amahektha angama-350. Ngaphezu kwalokho, kusuka ku-2021 sihlela ukwethula ama-beet kanye ne-izaqathe.
Izinhlobo ezahlukahlukene ngenkathi ekhulayo zinezidingo ezahlukahlukene zezimo zemvelo, okuqukethwe kwezakhamzimba emhlabathini kanye nokudla okunamaminerali. Ngakho-ke, ipulazi ngalinye ekukhiqizeni imikhiqizo yezolimo, njengomthetho, likhula okungenani izinhlobo ezimbili zesitshalo esisodwa. Emasimini ethu, ngokwesiko silima izinhlobo zamazambane njengeGala neRed Scarlett. Ngaphezu kwalokho, ingxenye yendawo kulo nyaka ibinomsebenzi wokutshala amazambane iVega neMerlot.
Ama-precursors amazambane angaba yisinaphi njengomquba oluhlaza noma ukolweni.
Amazambane avunwa nabavuni bamazambane abahanjisiwe banamuhla iGrimme SE 260. Ikhwalithi yalo mshini ihlangabezane nakho konke ebesikulindele, ihlangabezana ngokugcwele nazo zonke izidingo ezidingekayo.
Ukuba nokugcinwa kwekhwalithi kungenye yezithako eziyinhloko zokuphumelela kwebhizinisi nenzuzo. Izintengo zokuthengiswa kwamazambane "ngenkathi ephezulu", eqala kusukela ngoDisemba kuya kuMeyi, ingahle idlule izikhathi eziphindwe kabili kuya kwezingu-2 ngentengo ngesikhathi sokuvuna.
Sinephrojekthi enkulu yokwakha izindawo zokugcina ezinhlanu zemifino ezintsha, futhi njengamanje inkampani yakhe indawo yokugcina izinto yohlobo lwama-hangar (engenafreyimu) yamathani ayizinkulungwane eziyi-7 amazambane aneziteshi zokungenisa phansi phansi. Ngonyaka ozayo, enye indawo yokugcina yohlobo olufanayo enomthamo wamathani ayizinkulungwane eziyi-3,5 izosebenza.
Ngaphambi kokugcina amazambane azogcinwa, amazambane abekiwe ayahlanzwa, omiswe, abulawe amagciwane futhi alashwe izifo nezifo. Umshini osetshenzisiwe wokungenisa umoya kanye nowokugcina nawo unamagciwane. Le yinqubo ebalulekile futhi iyisisekelo sokunciphisa ukulahleka kwesitoreji.
Ngo-2017, inkampani yaqala ukuhlinzeka amazambane ezitolo eziyi-13 zaseMyasnov eziseMoscow naseNizhny Novgorod. Okwamanje siphinde sihambise amazambane ethu kunethiwekhi yeVkusVill. Ngaphezu kwalokho, izingxoxo ziyaqhubeka ngokubambisana okungahle kwenzeke namaketanga "Victoria", "Azbuka Vkusa", "Globus Gourmet". Siphinde futhi senze ukuhweba okuncane okuthe xaxa kusuka ekukhiqizeni. Onke amazambane akhuliswe emasimini ethu athobela iGOST.
Sizoqhubeka nokuqalisa iphrojekthi yokwakha inxanxathela yezindawo zokugcina izitshalo ukuze silethe umthamo wazo wokugcina ube ngamathani ayizinkulungwane eziyi-17,5. Sizothuthukisa uhlobo lwethu lweZavidovskiy eco-amazambane. Ngokuzayo, sihlela ukuvula isitolo sokucubungula imikhiqizo yemifino. Kunomgomo ekuthengeni ifolishi - ukuthatha isikhundla esiphambili esifundeni saseMoscow futhi ufinyelele kumthamo wokuthengisa cishe wamathani angama-4 ngonyaka.
Okwamanje, amapulazi amaningi anenkinga nabasebenzi. Kuphathelene nenkampani yethu futhi: kukhona ukuntuleka kochwepheshe abaqeqeshiwe emkhakheni we-agronomy kanye nabashayeli begandaganda bawo wonke amakilasi, ikakhulukazi labo abanolwazi ngemishini yanamuhla yangaphandle.
Tags: "Amazambane aseZavidovsky""Nweba"amazambane akhulaIsifunda saseMoscow
Imbewu enozalo oluhle kakhulu. Ungakugwema kanjani ukonakala kwamazambane bese uthola izivuno ezicebile
Into entsha yobuciko enikezelwe kumazambane ivele esifundeni iTyumen